Maguta akanakisa ekutenga: Kumusoro gumi dzevashanyi dzinodiwa nevashanyi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Shopping » Maguta akanakisa ekutenga: Kumusoro gumi dzevashanyi dzinodiwa nevashanyi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • wedzero • nhau • Shopping • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kushanya kwekushanya ipfungwa yakakurumbira inotsanangurwa senzira yemazuva ano yekushanya inoitwa nevashanyi kune avo vanotenga zvinhu, kunze kwenzvimbo yavo yekugara, ndicho chinhu chinosarudza mukufunga kwavo kwekufamba. Kupi kune vatengi vanoenda?
Sezvo huwandu huri kuwedzera hwevanhu vaine majekiseni avo eecovid-19, kufamba kuri kuwedzera zvakare, vashanyi vari kutanga kuoneka mumaguta mazhinji pasirese.
Paunenge uchifunga nezvenzvimbo yekufamba, zvinhu zvakawanda zvinopinda mukutamba zvichienderana nezvinodiwa uye bhajeti.
Kune vashanyi vari kutsvaga ruzivo rwakakura rwekutenga parwendo rwavo isu takanyora mamwe emaguta akanakisa ekushanyira gore rino.
Kutenga pamhepo vs Kutenga-muchitoro
Yedu sarudzo yekutenga yakakura ikozvino kupfuura nakare kose. Nepo vamwe vanhu vachiri kufarira kushanyira zvitoro chaizvo, vamwe vanohodha zvinhu zvavo nemasevhisi online. Vanhu vazhinji, zvisinei, vanosarudza musanganiswa wezvose zviri zviviri. Isu tinoraira grocery kuti tizadze iyo firiji, chipfeko chitsva chechiitiko chiri kuuya, uye imba yekushongedza senge prints kugadzirisa dzimba dzedu.
Nemafoni efoni, malaptop, uye zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi muhupenyu hwedu, internet inowanikwa nyore nyore miniti yega yehupenyu hwedu. Nepo kushambadzira kwepamhepo kuchinyanya kufarirwa - uye kucharamba kuri sarudzo hombe kune dzakawanda zvatinoda nezvatinoda - kudiwa kwekutenga-muchitoro kunogarawo kwakasimba.
Chii chinotsanangura guta rakanaka rekutenga?
Chiitiko chekutenga chinokwezva vashanyi kumaguta pasi rese. Guta rega rega rinopa chiitiko chakasarudzika, asi mazhinji ane zvimwe zvinhu zvakafanana. Ivo vanowanzo maguta makuru, ine akasiyana ezvitoro zvakasiyana uye musanganiswa wezvitoro nemaketeni makuru nemigwagwa inoyevedza ine maboutique emuno.
Mitengo inosiyana zvichienderana nenyika inowanikwa neguta, uye kunobva vashanyi. Akakurumbira maguta ekushambadzira anopa mashopu anotangira pamutengo wakaderera kusvika kuneumbozha. Izvo zvakajairika chiitiko zvine basa, futi. Nzvimbo senge New York City neParis dzinopa zvakawanda zvekuona, pamwe nesarudzo zhinji dzekugara uye dzekudyira.
Mazhinji maguta anozivikanwa ekutenga
Vashanyi, vanoda zvekutengesa, vanoenda kupi? Heano dzimwe dzenzvimbo dzakanakisa dzazvino.
Mamirioni evashanyi anoshanyira guta guru reEngland gore rega. Guta rinopa nzvimbo hombe dzekutenga seWestfield, kushambadzira kwepamusoro kuHarrods, madhiri akanaka kumisika yemigwagwa yakasiyana, uye zvitoro zvakawanda zvinoyevedza. Tea, mbatya, uye zviyeuchidzo ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinozivikanwa kwazvo zvekutenga pano. Oxford Street neCovent Garden vari munzvimbo dzakabatikana dzekutenga.
Vashanyi muHong Kong vane mikana inoita seisingagumi yemikana yekutenga. Guta rine zvese zvemhando yepamusoro-soro munzvimbo huru dzekutengesa uye zvinhu zvinonakidza mumisika yemugwagwa. Kowloon ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzekutenga. Vashanyi vari kutsvaga chibvumirano vachave nemikana yakawanda pane semuenzaniso Temple Street neJade Market.
New York City izere nematunhu ekutenga, neFifth Avenue iri imwe yeakakurumbira. Mahwindo ekutenga akakurisa zvakare - kunyanya kana Krisimasi ichisvika uye guta rizere nekushongedza. Greenwich Village, Iyo Yepazasi Kumabvazuva, SoHo, uye Madison Avenue vese vanopa zvakasarudzika zvekutenga zviitiko.
Dzimwe nzvimbo dzinozivikanwa dzekutenga:
Aya maguta gumi anokwezva mamirioni evashanyi gore rega rega. Vazhinji veava vashanyi vanobhururuka kuenda kumba nemasutukesi avo akanyatso zadzwa kupfuura zvavakaita pakusvika.
Kune dzimwe nhau dzekutenga tinya pano.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 32